आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना — Vikaspedia
आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना
तपाईको समुदायको नक्सा बनाउनुहोस्
भेटेर आफ्नो योजना बनाउनुहोस्
कसरी कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने
तेलले नष्ट गरेको जमीनको पुनस्र्थापना
पोखिएको तेल सफा गर्ने नया“ तरीका
तेलको प्रयोगमा महिलाहरूको विरोध
तेल र कानुन
यदि तपाई तेल निकाल्ने ठाउँ वा कारखाना नजिक बस्नुहुन्छ भने आफ्नो समुदायसँग मिलेर आपत्कालीन समयको (जस्तैः चुहावट र लागि सुरक्षा योजना बनाउनुहोस् ।
सुरक्षा योजनाको एउटा भाग भनेको कुन ठाउँबाट समस्या शुरु हुन सक्छ र कुन स्रोतलाई आपत्कालीन समयमा जोगाउनु पर्छ भनेर थाहा पाउनु हो समुदायको नक्साले यसमा मद्दत गर्न सक्छ ।
समुदायको अरु मानिसहरूसँग मिलेर तपाई बस्ने ठाउँको नक्सा बनाउनुहोस् । त्यसमा तेलको इनार, तेल निकाल्ने ठाउँ, पाइप लाइन, फोहर हाल्ने खाल्डो, कारखाना र अरु प्रदूषणको स्रोतहरू समावेश गर्नुहोस् । साथै तपाईले पानी ल्याउने ठाउँ, अन्न उमार्ने र ल्याउने ठाउँ, जनावर राख्ने ठाउँ र सामुदायिक स्रोतहरू पनि समावेश गर्नुहोस् ।
विगतमा भएको घटना, चुहावट र प्रदूषणको कुरा गर्नुहोस् । त्यसको असर के थियो ? नक्सामा असर भएका ठाउँमा चिन्ह लगाउनुहोस् । त्यसपछि तपाईसँग भएको स्रोतको सूची र आपत्कालीन समयमा यसको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर योजना बनाउनुहोस् ।
हामीलाई केको जरुरत छ
पानीको माथिल्लो मुहान वा सामुदायिक पानीको ट्यांकी
भण्डार गरिएको पानी हरेक ६ देखि १२ महिनामा फेर्ने ।
मानिसलाई सुरक्षित रूपमा जानको लागि ट्रक र अरु साधन ।
आपत्कालीन समयमा समुदाय, सरकारी प्रतिनिधि र पत्रकारहरूलाई सूचना दिन १ वा बढी मानिस छान्ने ।
स्कूल, चर्च र भेटघाट गर्ने ठाउँ ।
सूचना दिन टेलिफोन वा रेडियो ।
हस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीको लागि टेलिफोन नम्बर ।
तेल कम्पनीहरूले तेल निकाल्नु भन्दा पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले तेल चुहावटको बेला कम्पनी केके को लागि जिम्मेवार छ भनेर पुष्टि गर्छ । तपाईको समुदायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रयोग गरेर आपत्कालीन समयको बेला कम्पनीलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भनेर छलफल गर्नुहोस् ।
उदाहरणको लागि चुहावट भएको पाइपलाई सफा नगरेसम्म बन्द गर्ने माग राख्न सक्नुहुन्छ । के समुदायलाई खाने पानीको आपूर्ति र नोक्सानीको लागि क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य सेवाको लागि पैसा कम्पनीले दिन सक्छ ? (वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको लागि अनुसूची २ हेर्नुहोस्) ।
तेलको चुहावटले लामो समयसम्म जमीनलाई नराम्रो असर पु¥याउँछ । यदि तेल सफा गरेर जमीनलाई पहिलाकै स्थितिमा आउन धेरै वर्ष छोड्ने हो भने जमीनलाई पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ । तर यसको लागि धेरै समय लाग्छ । (जमीन पुनस्र्थापनाको बारेमा जान्न अध्याय ११ र पृष्ठ ४९६ हेर्नुहोस्)
अमेरिकामा डिजेल पोखिएपछि धेरै कम्पनीहरूलाई सफा गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न आग्रह गरियो । माटो, जहाँ तेल पोखिएको थियो, त्यसलाई थुप्रो बनाइयो र हरेक कम्पनीलाई एउटा थुप्रो दिइयो ।
एउटा कम्पनीको सानो व्यवसाय थियो जसले च्याऊ उमारेर बेच्ने गथ्र्यो । व्यापार चलाउने मानिसलाई जंगलमा आगो लागेपछि र अरु प्राकृतिक घटना घटेपछि च्याऊ उम्रेको देखेको थिए । च्याऊमा नष्ट भएको जमीन पुनस्थापना गर्ने शक्ति भएको उनको विश्वास थियो । उनको समूहले त्यस थुप्रोमा च्याऊ लगाए । त्यसपछि त्यसलाई छोपे र प्रतिक्षा गरे । ६ हप्तापछि जब उनीहरूले त्यसलाई खोले अनि जे देखे त्यो आश्चर्यजनक थियो । माटो ठूलो ठूलो च्याउले भरिएको थियो र कुनै ३० से.मी. सम्म पनि थिए । उनीहरूले च्याऊ र माटोलाई प्रयोगशालामा लगी जाँच गराए । च्याऊमा तेल वा अरु कुनै विषाक्त पदार्थ थिएन । च्याऊले पूर्ण रूपमा माटोलाई सफा गरेको थियो ।
त्यसपछि जे भयो कथाको त्यो महत्वपूर्ण भाग हो । च्याऊ बढेपछि झिङ्गाहरू आएर त्यहाँ अण्डा पार्न थाले । किराहरूको बच्चा देखिन थाले । चराहरू उडेर आउन थाले र अरु जनावरहरूले च्याऊ र किराहरू खान थाले । चरा र जनावरहरूले बीउहरू ल्याउन थाले र विरुवाहरू उम्रन थाले । प्रदूषित माटोको थुप्रो अब जीवन भएको बगैंचामा परिणत भैसकेको थियो ।
प्रयोगमा यो तरीकाले काम ग¥यो, तर कसैलाई थाहा छैनकी यो तरीकाले सबै स्थिति र ठाउँमा काम गर्छ भनेर । च्याऊ र अरु प्राकृतिक वस्तुले तेलको चुहावट सफा गर्छ भनेर थाहा पाउन अझै धेरै काम गर्न जरुरी छ ।
तेलको धनी ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने एउटै तरीका भनेको कसैले पनि तेलको स्रोतलाई प्रयोग गर्छ उसले मानिसको स्वास्थ्यमा खतरा नहुने गरी र उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्नु नै हो । किनभने तेल धेरै महत्वपूर्ण छ र यसको काममा धेरै पैसा पनि हुन्छ ।
नाइजेरियाको नाइजेर रिभर डेल्टामा कुनै समय माछा, जनावर र खेती भएका उब्जाउ जमीन थियो । जब तेल कम्पनी पहिले यहाँ आए उनीहरूलाई आर्थिक फाइदा दिने आश्वासन दिए । तर तेल निकालिएको ३० वर्षपछि पनि कम्पनीले आफ्नो बचन पूरा गरेन । एक नाइजेरियन महिलाको अनुसार “हामी रिसाएका छौं । सन् १९७० देखि कम्पनी आएपछि उनीहरूले हाम्रो जीवनको लागि केही पनि राखेनन् । हामीसँग नदिनालाको प्रदूषण, जंगल र खेतमा भएको नोक्सानी र ग्याँस फ्लेयरिङ्ग बाट हुने आवाज बाहेक देखाउनलाई केही छैन । हामीसँग केही आशा छैन, तर हामीलाई भगवानले दिएको बरदानबाट उनीहरू लाखौं कमाइरहेका छन् । उनीहरू हाम्रो रोदन सुन्दैनन र वास्ता पनि गर्दैनन् ।” नाइजेरियाका महिलाहरूले सबै समुदायको मानिसहरू समावेश गरेर शान्तिपूर्ण विरोध सुरु गरे । महिलाहरूले चेभरोन टेक्साको नामक मुख्य कम्पनीलाई जागिर, शिक्षाको लागि स्रोत, पानी, बिजुली र सामुदायिक विकास गरिदिन माग गरे । उनीहरूले तेल कम्पनीले गरेको सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि मागे ।
चेभरोन टेक्साकोले सरकारलाई बलियो भएर जवाफ दिन बोलाए । प्रहरी र सिपाहीहरूले अश्रु ग्याँस हानेर, महिलाहरूलाई पिटेर र दुःख दिएर आक्रमण गरे । धेरै घाइते भए र केही मारिए । तर महिलाहरूले आत्मबल र कलाकासाथ जवाफ दिए । केहीले तेल कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा अवरोध गरे । अरुले मुख्य निकास ओगटे र सैयौंले नाइजर नदिबाट तेल लगिने स्टेशनमा अवरोध गरे । महिलाहरूले नाका र स्टेशन ओगटेको हरके दिन कम्पनीलाई १ लाख को घाटा प¥यो ।
तेल कम्पनीका पदाधिकारले अन्त्यमा हारे । चेभरोन टेक्साकोले जागिर र महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न थोरै सहयोग गर्ने भयो । उनीहरूले विद्यालय, अस्पताल, पानी र बिजुली दिने बाचा पनि गरे ।
तेल कम्पनी र नाइजेरियाको सरकारको रुखो व्यवहारले आफ्नो नाफा बढाउन उनीहरू केही पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखायो । नाइजेरियाक महिलाहरूले संसारको मानिसहरूलाई तेलको विकासबाट हुने दुःख होइन बरु त्यसको फाइदाको हिस्सा लिन प्रोत्साहित गरे । नभए, उनीहरूले तेलको विकास रोक्नेछन् ।
धेरै देशहरूले आफ्नो जनता, पानी, जंगली जीवलाई प्रदूषणबाट बचाउन र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि कानून बनाउँछन् । तेल कम्पनीहरूलाई चुहावटको जिम्मेवारी दिलाउन स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन् । तर जब मानिसहरू एकजुट भएर कानुनलाई लागू गर्छन् तब मात्र त्यो प्रभावकारी हुन्छ (अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लागि अनुसूची २० ।
जब इक्वाडोर मा टेक्साकोले तेल खन्न थाल्यो तब कोफेन ९ऋयाबल० मानिसहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहले उनीहरूको जीवन नष्ट गर्छन् भनेर सोचेका थिएनन् । २० वर्षभन्दा बढी कम्पनीले तेल र विषाक्त फोहर पानी लाखौं लिटर वातावरणमा फ्याँके ।
कोफेनलाई कैयौं पुस्तादेखि खानको लागि स्रोत बन्दै आएको खोला प्रयोग गर्न लायकको भएन । मानिसहरू हरेक दिन धेरै समय खाने पानी, शिकारको लागि जनावर खोज्न थाले । धेरै मानिसले विनाशको कारण ठाउँ छाडे । कोफेनका नेताहरूको अनुसार टेक्साकोले उनीहरूको परम्परागत जीवनशैलीलाई नष्ट र हजारौं मानिसलाई विरामी बनायो । कोफेनको जनसंख्या १५,००० बाट घटेर जम्मा ५०० मा झ¥यो ।
टेक्साकोको प्रदूषणको असर परेका मानिसहरूले अमेजोनको बचावको लागि एउटा समूह बनाए । उनीहरूले गम्भीर विरामीबाट ग्रस्त भएका मानिसहरूको लागि औषधीको व्यवस्था गरे । टेक्साकोको तेल कार्यबाट भएको स्वास्थ्य असरको बारेमा जान्न शिक्षाको व्यवस्था गरे । उनीहरूले राजधानी क्योटो का वातावरणकर्मी र अमेरिकाका वकिलहरूसँग कुरा गरे । उनीहरू सबैजना एउटा योजनासहित अगाडि आए । नेता, वातावरणकर्मीहरू हिँडेर, पानीजहाजबाट र हवाईजहाजबाट न्यूयोर्क शहरमा आई टेक्साको विरुद्ध करोडौंको मुद्दा दायर गरे ।
टेक्साकोले मुद्दा हटाउने कोसिस ग¥यो । कम्पनीले मुद्दा इक्वाडोरकै अदालतमा हुनुपर्ने माग ग¥यो किनभने प्रदूषण इक्वाडोरमै भएको भन्ने कुरा अगाडि बढायो । तर सहभागीहरू इक्वाडोरमा न्याय नपाउने कुरामा चिन्तित भए । उनीहरूले अमेजोनलाई प्रदूषित गर्ने निर्णय अमेरिकामै भएको कुरा पुष्टि गरे । न्यायाधीश उनीहरूको कुरा सुन्न तयार भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा अमेरिकाको अदालतमा हेरिएको यो पहिलो घटना थियो । कोफेनका नेताहरू अति नै खुशी थिए ।
टेक्साकोले मुद्दा हटाउने १० वर्ष प्रयास ग¥यो । नयाँ न्यायाधीशले मुद्दा इक्वाडोरमै कोशिस गर्नुपर्ने कुरा गरे तर यदि परिणाम नआएको खण्डमा त्यसलाई फेरी न्यूयोर्कमै कोशिस गरिने कुरा पनि राखे । मुद्दा अझै पनि सकिएको छैन । रेन फरेष्टबाट तेल निकालिंदै छ त्यसैले मानिसहरू अझै स्वास्थ्य समस्या खेपिरहेका छन् । टेक्साकोकम्पनीबाट न्याय पाउने उनीहरूको अभियानले धेरै मानिसहरूलाई तेलबाट भएको असरको बारेमा र टेक्साकोलगायत अरु कम्पनीहरूलाई सुरक्षित तरीकाले तेल निकाल्नु पर्ने कुरा सिकायो ।